Qatar oo la Rabo in Jaamacadda Carabta laga Saaro + Sababta – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Qatar oo la Rabo in Jaamacadda Carabta laga Saaro + Sababta
Qatar oo la Rabo in Jaamacadda Carabta laga Saaro + Sababta
baraha bulshada gaar ahaan wadamada carabta ayaa aad loo hadal hayaa ‘in Qatar laga saaro jaamacadda carabta’ ayaa kor u kacday baraha bulshada kadib markii ay si iskeed ah u taageertay duulaanka Turkiga ee Siiriya waxayna ku qasabtay 2 milyan oo qaxooti Siiriyaan ah inay si qasab ah dib ugu dejin meelo kale oo bariga Syria ah ayna ka baxaan goobihii ay ka baxeen dagaalka iyagoo door bidaaya howlgalada dib u dejinta Iiraan iyo Hezbollah ee la shaqeynta xukuumada Dimishiq.
Bogagga twitter-ka ayaa waxaa ka digaya eedeyn ay u jeediyeen warbaahinta Qadar oo ku aadan in Turkiga uu ku soo duulay Siiriya si looga hortago weerar dhow.
Tani waa markii ugu horreysey ee ku baaqa in eryidda Qatar lagu eedeeyo bil ka hor inay kicisay fowdo ka dhacday Masar xilligii madaxweynaha Masar uu joogay New York si uu uga qeyb galo shirarka Qaramada Midoobay. Qatar iyo Turkiga ayaa ah kuwa keliya ee taageeraya gooni goosadka Tripoli, ee caasimada Libya.
Faallooyinka ayaa diiradda saaraya siyaasadaha dhowaan Doha, taageeradooda kooxaha xag-jirka ah ee hubeysan ee Syria iyo taageeradooda gardarada Turkiga ee ku aaddan dhulka Suuriya.
Hal isticmaale ayaa faallo ka bixiyay: “Qatar waa in laga saaraa Jaamacadda Carabta maxaa yeelay waxay qorsheysay oo maalgelisay argagixisada Erdogan ee Suuriya, waxay taageertay kooxaha argagixisada iyo xulafada la ah Faaris, Turks, Jinniyo Walaalayaal, Houthis argagixiso, Xamaas, Al Qaacida iyo Mobilisation caan ayay taageertaa.
Qatar, marka laga reebo inay tahay dalka kaliya ee Carbeed ee taageera duulaanka Turkiga iyo dib u dejinta Siiriya, waxay sidoo kale diiday inay bixiso qaybteeda miisaaniyadda Jaamacadda Carabta.
Previous articleClaims to expel Qatar from the Arab League
Next articleGuddoomiyaha Gobolka Banaadir oo La Kulmay Danjiraha Midowga Yurub ee Soomaaliya “Sawirro”
Madaxweynaha koonfur galbeed iyo wafdi uu hogaaminayo oo dib ugu laabtay...